2 ချက်ပြုတ်နည်းများကိုသင်မြည်းစမ်းရမည်ဟု tofu သုံးပြီး - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ သငျသညျကိုမြည်းစမ်းရမည်ဟု tofu သုံးပြီး "2 ချက်ပြုတ်နည်းများ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
သငျသညျကိုမြည်းစမ်းရမည်ဟု tofu သုံးပြီး2ချက်ပြုတ်နည်းများ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
Tele RELAY တစ်ခု 18 သြဂုတ်လ 2019
ကနေဖန်ဆင်းတော်ဒိန်ခဲ ပဲနို့ tofu နာမကိုအမှီအဖြစ်လူသိများသည်။ , ပရိုတိန်းမြင့်မားခြင်းနှင့်အဆီထဲမှာအနိမ့် tofu လည်းကယ်လစီယမ်နှင့်ဗီတာမင်၏အရေးပါသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုဒီမှာနှစ်ခုအရသာ tofu ချက်ပြုတ်နည်းများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖိတ်ခေါ်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အကြှနျုပျတို့သညျကိုပြောသည်အဖြစ်, tofu ပဲပုပ်နို့ရည်ကနေကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအစဉ်အလာဒိန်ခဲရန်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဒါပေမယ့်အစဉ်အလာဒိန်ခဲနဲ့မတူပဲ tofu Lactose ကိုမဆံ့မခံပါဘူး, ဒါကြောင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်မှသည်းမခံသောသူမြားအတှကျစံပြအစားအစာဖြစ်ပါတယ်.
ထို့အပြင်၎င်း၏အရသာကြောင့်စွယ်စုံစေသည်: ကနည်းလမ်းများစွာအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအပေါငျးတို့သပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအလွန်ကောင်းစွာတတ်၏။ ယင်း၏အကျိုးခံစားခွင့်အပြင် ...
အဆိုပါအကျိုးရှိသော tofu စားသုံးမှု
ဒါဟာကူညီရာမရှိမဖြစ်ဖက်တီးအက်ဆစ်, ဗီတာမင် E နှင့်လက်ဆီသင်, ထောက်ပံ့ လက်စထရောနှင့် triglyceride နှုန်းထားများလျှော့ချ
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီအစားအစာကိုကယ်လစီယမ်ကြွယ်ဝဖြစ်ပါသည် (159 တစ်ခုချင်းစီကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် 100 ဂရမ်ထဲမှာကယ်လ်စီယမ်၏ mg), သံ, သွပ်နှင့်အခြားသတ္တုဓာတ်နှင့်ဗီတာမင်
အဆိုပါ isoflavone အကြောင်းအရာအတူတကွယင်း၏ကယ်လစီယမ်နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်နဲ့အတူ tofu စေသည် အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ထိန်းညှိရန်စံပြအစားအစာ။ ဒီအစားအစာကိုအထူးသသည်အဘယ်ကြောင့်အဲဒီင် သွေးဆုံးမှတဆင့်အမျိုးသမီးတွေအကြံပြု
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အားလုံး၎င်း၏အကျိုးရှိသောပံ့ပိုးမှုများကိုရှိနေသော်လည်းကြောင့်ပဲပုပ်အပေါင်းတို့နှင့်ပဲပိစပ်ထုတ်ကုန်များ၏ပမာဏဆံ့ကြောင်းအကောင့်သို့ယူမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်oxalate. ထိုကဲ့သို့သောကျောက်ကပ်ကျောက်များအဖြစ်ကျောက်ကပ်ထဲတွင်ပြဿနာများမှပင်ဆင်းရဲသူကလူများ, tofu စားသုံးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါး၏ကျန်ရှိသောခုနှစ်တွင်နှစ်ခုအရသာ tofu ချက်ပြုတ်နည်းများတွေ့ရှ။ သင့်ရဲ့ခါးစညျးရှေ့ဖုံးပါ!
marinated Tofu ကြော်
အဆင်သင့်စာရွက်ပြီးတာနဲ့သူကတစ်ဦး aperitif အဖြစ်သို့မဟုတ်အခြားဟင်းလျာများများအတွက်အခြေခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကတော့ marinade စာရွက်ကွိုတငျပွငျဆငျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပန်းကန်လုံးထဲမှာ, သံလွင်ဆီလောင်းထို့နောက်ယခင်ကကုန်တယ်ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့နှင့်နံ့သာမျိုး, အမည်ရစမုန်ဖြူနှင့် oregano ထည့်ပါ။ သင့်ရဲ့အကြိုက်မှဆားနဲ့ငရုတ်ကောင်းထည့်ပါ။
ထို့နောက်တစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအရောအနှောရရှိရန်နှင့်ယခင်ကအပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်သို့ tofu ထည့်သွင်းဖို့ကောင်းစွာရောမွှေပါ။ အဆိုပါ marinade ထဲမှာထည့်သွင်းမတိုင်မီ wring ဖို့သတိရပါ။ အဆိုပါ tofu အဆိုပါ marinade ၏အရသာအထိစိမ်ကြပါစို့။ ပိုငျသညျစွန့်ခွာခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့။ အဆိုပါစံပြလေးငါးနာရီစိမ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဝက်ထိုအချိန်တွင်ယူနီဖောင်း impregnation သေချာဖို့အပိုင်းပိုင်းပြန်သွားပါ။
လေးငါးနာရီလောက်မှာပြီးနောက်, ပဝါနှင့်နှမ်းမျိုးစေ့များပေါ်တွင်မုန့်ညက်ထားတော်မူ၏။ မုန့်ညက်မုန့်ဟာ tofu အပိုင်းပိုင်းဝတ်ပြုကြလော့။
ဒါဟာအခု tofu အပိုင်းပိုင်းကြော်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦး skillet ခုနှစ်, သံလွင်ဆီ၏အကောင်းတစ်မိုးဖွဲလောင်းနှင့်အပူကောင်းစွာကြကုန်အံ့။ ပူရေနံနှင့်တပြိုင်နက်, သူတို့ကရွှေညိုများမှာသည်အထိ tofu အပိုင်းပိုင်းကြော်။
ပိုလျှံရေနံဖယ်ရှားပစ်ရန်စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါအပျေါ tofu အပိုင်းပိုင်းထားပါ။
ကဲဒါဆိုရင်တော့! သငျသညျယခုသင့်အရသာ Marine tofu စာရွက်ခံစားနိုင်။
ဤဆောင်းပါးသည်သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်: spaghetti ရွှေဖရုံသီး၏အရသာချက်ပြုတ်နည်းများ: လွဲချော်ခံရဖို့မဟုတျပါ
250 ဆ tofu (အလွန်ပျော့မဟုတ်)
Cilantro သို့မဟုတ် parsley
ပထမဦးစွာ, အခွံကိုဆေးကြောခြင်းနှင့်ကြက်သွန်ခုတ်။ ဒါကြောင့်ရွှေအညိုရောင်လှည့်သည်အထိအနည်းငယ်သံလွင်ဆီနှင့်ဒယ်အိုးထဲတွင်ကြက်သွန်Sautéနှင့်ပျော့ပျောင်းဖြစ်လာသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဘို့စာအုပ်ပြင်ဆင်မှု။
အခုတော့ထုနံနံခြင်းနှင့်ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့ခုတ်။ သင်တစ်ဦး Blender ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ tofu add နှင့်သင်တစ်ဦးဿုံတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအရောအနှောရယူသည်အထိရိုက်နှက်မှုကိုဆက်လက်။
ကြက်သွန်, ကြက်ဥ, ပေါင်မုန့်အစအနများနှင့်အနီရောင်ငရုတ်ကောင်း: အခုသင်ရုံအောက်ပါပါဝင်ပစ္စည်းများပြင်ဆင်အရောအနှောသို့ထည့်သွင်းရမည့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဆားနဲ့တပ်မက်လိုချင်သောအဖြစ်ငရုတ်ကောင်း, ထို့နောက်တစ်ဦးဿုံတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအရောအနှောရရှိရန်မွှေပေးပါ။ အဆိုပါအယူအဆကိုသင်တစ်ဦးဟမ်ဘာဂါသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု၏အရွယ်အစားများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဖန်တီးရန်အသော့ပွငျနိုငျသောပျော့ငါးပိရယူရန်ဖြစ်ပါသည်။
အခုတော့ဘောဇဉ် (ရွေးချယ်မှု) ကိုဖုံးအုပ်ထား breading သင့်ရဲ့အသားကင်၏အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အနည်းငယ်သံလွင်ဆီနှင့်သူတို့ကိုကြော်။
သင်အကြိုက်ဆုံးပူးတှဲနှင့်အတူနွေးထွေးသောသင့်ရဲ့အသားကင်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။ သင်တို့သည်လည်းဟမ်ဘာဂါ Bun အတွက်သူတို့ကိုသုံးနိုငျ!
ဤဆောင်းပါးသည်သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်: ဒီအိမ်လုပ်စာရွက်နှင့်အတူပုဇွန်နှင့်အတူကျပ်, ဤအရသာရှိတဲ့အာလူး Make
သင်ရုံနှစျခု tofu ချက်ပြုတ်နည်းများရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
tofu အလွန်စွယ်စုံအစားအစာကြောင်းသတိရပေးပါ။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာပွငျဆငျနိုငျ: မီးဖို၌တစ်ဦးသုပ်အတွက်အသားနှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, meatballs, croquettes နှင့်အတူ ... ပင် tofu အချိုပွဲရှိပါတယ်။ ထို့အပွငျကလူအပေါင်းတို့သည်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအလွန်ကောင်းစွာတတ်၏။ ဤအရာအလုံးစုံအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သင့်ဟင်းလျာများထဲမှာထည့်သွင်းဖို့တှနျ့ဆုတျဘူး!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်အတွက်ပဲနှင့်ဖွဲ့သုပ်အပါအဝင်အသုံးပြုပုံအဲဒီအစားအစာနှင့်၎င်းတို့၏အာဟာရ၏အရသာကိုခံစားပါ။ Read more »
အနိမ့်ကယ်လိုရီညစာစားပွဲများအတွက်3ချက်ပြုတ်နည်းများ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
သငျသညျကိုမြည်းစမ်းဖို့ရှိသည်ကြောင်းကင်ဘာဂါများအတွက်2သက်သတ်လွတ်ချက်ပြုတ်နည်းများ - Improve သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေး